Divergent - एक अवधारणा पूरा ... कहाँ?
खुशी साथ समकालीन लेखक को एक धेरै छ कि कुनै पनि प्रकोप थिए दुनिया वर्णन। Dystopian उपन्यास धेरै लोकप्रिय छन्। साथै, लगभग हरेक कहानी देश को संस्कृति गर्न केही नयाँ कुरा ल्याउँछ। शब्द "Divergent" - यो घटना को राम्रो उदाहरण हो। तर "Divergent," साथै "Divergence" को अवधारणा प्रयोग भएको थियो कि भूल र प्रकाशित उपन्यास को रिलीज अघि छैन। तथापि, Veronica Roth नयाँ मानको, विशिष्ट embodiments सिक्न मद्दत गर्छ।
Divergence। व्यक्तित्व मनोविज्ञान
मनोविज्ञान अनुसार, तपाईं "Divergent" को अवधारणा लागू गर्न सक्नुहुन्छ जो एक आत्म छ। यी अक्सर सामान्य पङ्क्तिहरू बाहिर ढकढक्याउन छन् जो मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले पनि समाजमा जीवनको नैतिक र नैतिक पक्षहरू लगाए, तर सधैं स्वाद तिनीहरूलाई छैन, छ।
अक्सर व्यक्तिहरूलाई Divergent सकिन्छ जसले तिनीहरूलाई वरिपरि मानिसहरू बुझ्दैनन्। यो तिनीहरूले एक कल्पना संसारमा भन्ने तथ्यलाई कारण छ। व्यक्ति यस प्रकारको लागि, कुनै पनि सानो कुरा प्रेरणा को स्रोत बन्न सक्छ। यो कि जो अरूलाई पनि को गर्भ धारण गर्न सकेन भन्ने कुरा सिर्जना र, ठूलो कलाकार बक्समा बाहिर दुनिया देखेको छु जो, वा वैज्ञानिकहरूले सबैभन्दा संभावना छ, Divergent थिए विचारणीय छ।
प्राकृतिक चयन। Divergent कसरी बन्न?
जीव, तपाईंले पनि "Divergence" को अवधारणा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई जो, बारी मा, मतलब "अन्तर" ल्याटिन मूल "divergio", आउँछ। यसरी वासस्थानमा को परिवर्तन को पाठ्यक्रम मा रहन जगतले को विकास मा मतभेद निर्धारण अवधारणा।
त्यो छ, त्यस्तै प्राथमिक डाटा बावजूद, पशु अन्य अवस्थामा, अनिवार्य आफ्नै अद्वितीय सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ राखिएको छ। यस मामला मा हामी मात्र होइन व्यवहार तर पनि बाह्य मतभेद मनमा छ। खोपडी मा वृद्धि वा कमी - चरा, यो स्तनधारी मा चुच्चो मा परिवर्तन हुन सक्छ। सामान्य मा, बाँच्न जनावर मदत, कुनै पनि कारक भएको Divergence गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ।
Divergent: भाषा बिज्ञान को अर्थ
Divergent भाषा बिज्ञान मा आउँदैन। त्यसैले वैज्ञानिकहरू विभिन्न शब्दमा नै phoneme कल विकल्पहरू। divergents लागि अर्को अवधि - allophones। यसलाई "m" शब्दहरू "घर" र "घर", को phoneme "एक" शब्द मा "पाँच" र "पेट" र त्यसैले गाह्रो र नरम यस प्रकार देखि छ।
को Divergence एक ध्वनि मात्र हुन सक्छ। Divergence - यो पनि एउटा छुट्टै भाषा, एउटै भाषा को राष्ट्रिय भिन्न को गठन रूपमा क्षेत्रीय भाषा आवंटन प्रक्रिया छ। , रूसी युक्रेनी र बेलारुस - - एक प्राचीन रूसी देखि छुट्टयाएर थियो जो एउटा उदाहरण रूपमा, पहिलो घटना स्वतन्त्र3भाषाहरू सक्छ।
दोस्रो मामला मा भाषा बिज्ञान को मामला मा divergents के हो? एक उदाहरण हो अमेरिकी अंग्रेजी र ब्रिटिश अंग्रेजी। यहाँ तपाईं मात्र होइन उच्चारण मामलामा मतभेद पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी, शब्द को एक श्रृंखला फरक अर्थ एक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो विकास को पाठ्यक्रम मा एक साधारण भाषा परिवर्तन भएको छ, र अब हामी यी आफ्नै विशेषताहरु छन् कि फरक समूह छन् भनेर भन्न सकिन्छ छ।
अनुवाद। "Divergent" के गर्छ?
"Divergent" को अवधारणा एक लामो समय को लागि प्रयोग हालिदिए थियो। तर, माथि उल्लेख गरिएको, यो सक्रिय घरमा मात्र लेखक Veronica Roth उपन्यास को प्रकाशन पछि प्रयोग गर्न थाले। निस्सन्देह, यो एक सरल layman छ। जब संख्या बीचमा यो अवधारणा पहिले नै परिचित छ।
"Divergent" के गर्छ? को अंग्रेजी भाषा बाट शब्द को अनुवाद अलि फरक हुन सक्छ। त्यसैले, त्यहाँ पनि त्यस्तै अर्थ छ कि धेरै विकल्प छन्:
यो मुख्यतया जीवन मा वर्ण र दृष्टिकोण गर्न भन्छिन्। उपस्थिति मा भिन्नता सामान्यतया शब्द "Divergent" भन्न गर्दैन। यो जीवन मनोवृत्ति र mentality एक विशेषता छ। को पाठ्यक्रम, तपाईं तस्वीर--व्यक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ भने।
उपन्यास मा Divergent। disclosed अवधारणा रूपमा
अवधारणा को लोकप्रियता एक उपन्यास लेखक Veronica Roth ल्याएको छ कि भूल छैन। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न तार्किक छ र यो काम "Divergent" को यो शब्द लेखक कसरी बुझ्नुहुन्छ। यो बहुमुखी शब्द विचार गर्न मदत गर्छ।
के "Divergent" छ, यो ट्रिलजी को पहिलो भाग मा स्पष्ट हुन्छ। उपन्यास संसारमा सेट गरिएको छ, एक वैश्विक युद्ध मात्र जीवित शहर मा, बाँचे - शिकागो। शहर मा समाज पाँच factions विभाजित छ, र 16 उमेर वर्ष प्राप्त गरेको छ जो प्रत्येक व्यक्ति जो गुट उहाँले पर्छ निर्धारण परीक्षण हुनुपर्छ। получила пугающие результаты. यसको परीक्षण मुख्य पात्र मा Beatrice Pryor भयावह परिणाम प्राप्त भयो। तसर्थ, परीक्षण केटी, साहस को एक अंश मा स्थित सञ्चालन, Tris लुकाउने र परीक्षण बारेमा कुरा गर्न कुनै एक सल्लाह दिएको छ।
यो Tris रहस्य खोलिदिन्छ। आफूलाई कुनै पनि गुट को बाँध्न मा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ जो कोहीले उहाँले Divergent छ। पुस्तकको बीचमा मा हेरोइन जस्तै लागि त्यो Hunted रूपमा भनेर बुझ्छ। यो त्यो लुकाउन गर्नुपर्ने कारण छ। फलस्वरूप, यो अन्तिम भाग मा, विशाल बहुमत हुनेछ सीरम लागू हुँदैन। तर Beatrice बहाना र अधिकारीहरु को निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्मार्ट छ। यो घटना उनको उनको प्रेमी पनि Divergent छ कि पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।
शब्द को अर्थ "Divergent" अलिकति जो "विद्रोहीहरूले" भनिन्छ उपन्यास, को दोस्रो भाग मा फरक छ। यसलाई मानिसहरू divergents प्रमुख मानिन्छ छन्। मात्र तिनीहरूले शिकागो एक बस्ती स्थापित गर्ने ती बायाँ सन्देश, खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई सिमुलेशन र साँचो भिन्नता देख्न देखि, तर तिनीहरूले अन्तिम परीक्षा पार गर्न सक्नुहुन्छ, र गोप्य सन्देश पत्ता लगाउन। तथापि, मेयर तिनीहरूले बाँच्न चाहिने विश्वास छैन, र यसैले divergents नष्ट।
फेरि "Divergent" परिवर्तनहरू अवधारणा को तेस्रो भाग मा। यस समयमा यो जीन सीधा सिस्टम गर्नेहरूलाई तथाकथित देखिन्छ। तिनीहरूले "सफा" हुन मानिन्छ।
के Divergent छ?
साधारण रुचि छ नगर्ने हुन्छ - तपाईं माथि वर्णन गरिएको छ कि सबै आफैलाई familiarize भने, यो "Divergent" भनेर निष्कर्षमा गर्न सकिन्छ। खैर, यो अनुवाद छ, र अंग्रेजी देखि रूसी अनुवाद मा प्रयोग गरिन्छ।
मनोविज्ञान मा, अवधि एक व्यक्ति जीवन मा आफ्नो बोल्ड दृश्य भन्दा अन्य निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छ। जीव हामी मन र जीवित हुनुको उपस्थिति मा छ। भाषा बिज्ञान लागि जाँदा, त्यहाँ परिवर्तन प्राप्त र अलग समूह विभाजन गर्न सक्ने भाषाहरूको लागि प्रयोग अवधारणा छ।
के प्रश्नबारे छन् र adverbial participle
त्यस्तो अपमानजनक शब्द "plebeian" ... कसले भनेर हो?
मा, मा, मा - अंग्रेजी मा prepositions: साधारणतया, व्यायाम, उदाहरणहरू
"Rinofluimutsil" (नाक स्प्रे वा नाक खस्छ) प्रयोगको लागि निर्देशन। एनालग "Rinofluimutsil"
गुडिया, आफ्नै हातले amulets - एक मास्टर वर्ग। उनको हातमा स्लाव भाषाहरु पुतली आकर्षण। थाड़्ना गुडिया, amulets
"निसान लौरेल": सबै आठ पुस्तामा र आफ्नो विशिष्टताहरु को एक संक्षिप्त विवरण
Solkoseril दन्त टास्ने पेस्ट
दोस्रो योजना को प्रतिभा। Brayan Hellisey। हलिउड स्टार को जीवनी
त्रिएक पुल - सेन्ट पीटर्सबर्ग महान वर्ण
Tyutchev - "र पूर्व ... सबै म भेट" को विश्लेषण। कविता को इतिहास